Taham-panakalozana Euro (EUR) Ny Zavatra Lat (LVL) velona amin'ny fifanakalozana Forex tsena
Forex fifanakalozana tahan'ny updated: 23/01/2022 06:46
Euro - Zavatra Lat vidiny amin'izao fotoana izao eo amin'ny tsena Forex fifanakalozana amin'ny 23 Janoary 2022
06:46:33 (Forex tahan'ny vaovao farany tamin'ny 59 segondra)
Forex - tsenan'ny fifanakalozana. Ny tahan'ny fifanakalozana ny 1 Euro Ny Zavatra Lat amin'ny fifanakalozana Forex = 0.0000 LVL. Ny haingana indrindra an-tserasera Euro. Ny eo no eo ny Euro to Zavatra Lat ny tahan'ny fifanakalozana.
Forex varotra tabilao Zavatra Lat ny Euro miaina amin'ny 23 Janoary 2022
Forex varotra tabilao Euro Ny Zavatra Lat velona, 23 Janoary 2022
Ny tabilaon'ny Euro to Zavatra Lat ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny 23 Janoary 2022 eto, amin'ny ny tranokalanay. Ny tabilao eo amin'ny tampon'ny pejy dia noforonina mba ahafahanao mijery ny fiovan'ny fifanakalozana. Ampiasao ny tabilaon'ny fifanakalozana fifanakalozana hahafantatra haingana ny fanovana ny fifanakalozana. Ny tabilao dia ifampizarana, azonao atao ny manidina azy.
Niova fo Euro Ny Zavatra Lat Euro Ny Zavatra Lat Taham-panakalozana Euro Ny Zavatra Lat ny tahan'ny fifanakalozana tantara
Online ara-barotra Euro (EUR) mba Zavatra Lat amin'izao fotoana izao
Taham-panakalozana isa-minitra ao amin'ny tranokalanay. Fiovan'ny minitra ao amin'ny Euro ho an'ny Zavatra Lat - 0.0000 LVL. Ny tantaran'ny fifanakalozana amin'ny minitra farany dia aseho an-databatra. Ny fandefasana ny fampahalalana mivezivezy amin'ny tahan'ny minitra eo amin'ny tranokala.
Online ara-barotra Euro (EUR) mba Zavatra Lat ora farany varotra
Isaky ny ora ataonay ny tahan'ny fifanakalozana. fiovan'ny ora ao amin'ny Euro mankany amin'ny Zavatra Lat - 0.0000 LVL. Ilay tranonkala dia mampiseho latabatra iray handefasana mandritra ny ora 10 an'ny Euro mankany amin'ny kilasy Zavatra Lat mandritra ny adiny iray. Izahay manana tabilao soatoavina mandritra ny 10 ora farany mba mora jerena.
Online ara-barotra Euro (EUR) mba Zavatra Lat amin'izao fotoana izao ny fironana 23 Janoary 2022